नेकपाको सचिवालय बैठक आज, को बन्ला स्कुल विभाग प्रमुख? - Everest Dainik - News from Nepal
नेकपाको सचिवालय बैठक आज, को बन्ला स्कुल विभाग प्रमुख?
काठमाडौं, साउन १३ । पटकपटक स्थगित हुँदै आएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक आज बस्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज दिउँसो ३ बजे बैठक बस्ने भएको नेकपाका नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । विभाग गठनका सम्बन्धमा कुरा नमिल्दा सचिवालय बैठक पटकपटक स्थगित भएको थियो ।
याे पनि पढ्नुस नेकपा स्थायी कमिटी बैठक बस्दै, यी हुन् मुख्य एजेण्डा
विभागको टुङ्गो लगाएपछि पार्टीले जनसङ्गठन इञ्चार्ज र विभिन्न कमिटी गठन गर्ने तयारी गरेको छ । विसं २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता गरिए पनि अझैसम्म यसले पूर्णता पाइसकेको छैन । रासस
ट्याग्स: नेकपा, स्कुल विभाग